Sony Xperia Z5 Premium ကိုဗီဒီယိုတွင်ကြည့်ပါ Androidsis
Sony Xperia Z5 Premium ကို 4K screen ဖြင့်ပထမဆုံးဖုန်းကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်
Sony သည်ဘာလင်ရှိ IFA နောက်ဆုံးထုတ်ထုတ်ဝေမှုတွင်သူတို့၏ဖုန်းများတင်ဆက်ခြင်းတွင်ခေါင်းလောင်းကြီးကိုပေးခဲ့သည်။ ပြီးတော့ဂျပန်ထုတ်လုပ်သူကဘယ်သူမှမျှော်လင့်မထားဘူး ပထမ ဦး ဆုံးဖုန်းကို 4K မျက်နှာပြင်ဖြင့်ဖော်ပြပေးမည်; Sony Xperia Z5 ပရီမီယံ။
Sony Xperia Z4 မပါဘဲလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒီဖုန်းဟာအဓိကကျတဲ့အချက်မဟုတ်ကြောင်းကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကအသိအမှတ်ပြုထားသောကြောင့်စပိန်လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီသည်နောက်မျိုးဆက်ကိုစောင့်ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါမြင်လျှင် Sony Xperia Z5 ပရီမီယံ, သူတို့တကယ်ကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာရှင်းပါတယ်။
Sony Xperia Z5 Premium, 4K မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သောဖုန်းဖြစ်သည်
ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင် Sony Xperia Z5 Premium သည်သမားရိုးကျမော်ဒယ်ထက်ယူရို ၁၀၀ သာပိုကုန်ကျသည်ဒီနည်းပညာကပေးတဲ့အားသာချက်များကိုခံစားနိုင်ဖို့ဒီခြားနားချက်ကိုဖြုန်းတီးခြင်းဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
ဘာလိုချင်လဲ 4K မျက်နှာပြင်ဖုန်း? အခြေခံအားဖြင့်တော့ Sony Xperia Z5 Premium ကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ UHD panel ရဲ့အားသာချက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့စွမ်းအားကောင်းတဲ့ 23 megapixel Sony Exmor ကင်မရာက 4K resolution ဖြင့်ဗီဒီယိုများမှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်ဆိုပါက Xperia Z5 Premium သင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောမည်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ပင်ဖြစ်ပါစေသင်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးသင်ရိုက်ကူးခဲ့သည့်ဗွီဒီယိုများအားလုံးကို၎င်းတို့အားခံစားနိုင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။
ဒီလျှင်ကျွန်တော်တစ် ဦး အစွမ်းထက်ပရိုဆက်ဆာထည့်ပါ Qualcomm Snapdragon 810၄ င်းသည် micro SD card slot မှတစ်ဆင့်သိုလှောင်နိုင်သည့်သိုလှောင်မှုပမာဏ ၃၂ GB နှင့်ဖုန်မှုန့်များနှင့်ရေကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့်ဆိုနီသည်ကြီးမားသောအလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့သည်ဟုပြောနိုင်သည်။
အတူတူ Omnibalance ဒီဇိုင်း? ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘယ်သူမှငြင်းလို့မရပါဘူး ဂျပန်ထုတ်လုပ်သူကဆက်တိုက်ဆက်တိုက်လောင်းရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ လူတိုင်း၏အရသာကိုဤတွင်တွေ့ရသည်။ အချို့သူများက Xperia Z အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးတွင်အလားတူဒီဇိုင်းမျိုးရှိပြီးအခြားအသုံးပြုသူများကိုဂရုမစိုက်ပါ။
ထို့အပြင် Xperia အကွာအဝေးရှိ Omnibalance ဒီဇိုင်းကိုအသုံးချခြင်းသည်ကောင်းသည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။ဒီ Xperia Z5 Premium ဟာဒီဇိုင်းအသစ်တစ်ခုရှိသင့်ပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Sony က » Sony Xperia Z5 Premium ကို 4K screen ဖြင့်ပထမဆုံးဖုန်းကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်
Hansel De Aguas® ဟုသူကပြောသည်
g3 က 4k မဟုတ်ဘူးလား။
Hansel De Aguas®အားစာပြန်ပါ
g3 က 2k ပါ
ထို့အပြင်ဗွီဒီယိုများသာမက 8 megapixels နှင့်အထက်ရှိသောမည်သည့်ဓာတ်ပုံသည်မဆို 4k resolution ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းသည်မည်သည့်စက်ပစ္စည်းနှင့်မျှယခုလက်ရှိဖြစ်ပျက်ခြင်းမရှိသောပိုမိုကောင်းမွန်သောအမြင်များကိုမြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သူတို့ထည့်သွင်းထားသော dissipative အစိတ်အပိုင်း ၂ ခုကြောင့်အပူလျော့နည်းသွားသည်။ သို့သော်နို ၀ င်ဘာလမှထွက်ပေါ်လာသောကြောင့်၎င်းတို့သည်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းပြီး2နှင့်ထိုထက်ပိုသောဘက်ထရီကိုထားရန်လွယ်ကူသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၄၄ ကီလိုဂရမ်ရှိ 820mah အလွန်နည်းသောကြောင့် ။ မျက်နှာပြင်သည် c3430 ultra ကဲ့သို့နှစ်ဖက်စလုံးမှအဆုံးသို့မရောက်နိုင်ပါ။
Jose Enrique ဟုသူကပြောသည်